Dare Rinoti Vadzidzi Ngavadzokere Mudzimba Dzavakadzingwa kuUZ
Chikumi 28, 2017
Dare repamusoro soro raudza vakuru vepachikoro che University of Zimbabwe kuti varegedze vadzidzi vari kudzidzira hudhokotera vachigara padzimba dzavakanga vadzingwa neMuvhuro zvichitevera kuratidzira kwavakaita.
Vachipa mutongo wavo mushure mekunzwa nyaya iyi zvechimbi chimbi, mutongi wedare iri, Justice Nyaradzo Munangati-Manongewa, vati vadzidzi ava vanofanirwa kudzokera mudzimba dzavanga vachigara.
Vatiwo vakuru vepaUZ havafanirwe kutadzisa vadzidzi iva kupinda mudzimba dzavakadzingwa neMuvhuro panguva iyo nyaya iyi inenge ichinzwikwa mumatare.
Vachitaura mushure mekunzwikwa kwenyaya yavo, mumwe wemagweta evadzidzi ava, Muzvare Bellinda Chinowawa veZimbabwe Lawyers for Human Rights, vati dare rabvuma chikumbiro chavo.
Muzvare Chinowawa vati semagweta anorwira kodzero dzevanhu vafadzwa zvikuru nemutongo uyu sezvo vamwe vevadzidzi ava vanga vasina kwekugara panguva iyo vari kunyora bvunzo.
Nyaya iyi yakaendeswa kumatare nemumwe mudzidzi, Va Clifford Charera, vachibatsirwa nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinotiwo vadzidzi vatatu vasungwa vachipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga. Vasungwa avandiVaIgnatius Mukuchi, vanove mubati wehomwe muUZ SRC, VaSteven Tsikirai mukuru weboka rinomiririra vadzidzi ava, pamwe naVaKudakwashe Guta nhengo yeSRC.
Mune imwewo nyaya yanga iri kumatare edzimhosva, Pastor Evan Mawarire ve The Generation Church, pamwe nemutyairi wavo, VaOcean Chihota, vabvisiswa mari yechibatisoinoita mazana maviri emadhora kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo.
Vaviri ava vakasungwa neMuvhuro apo vadzidzi vairatidzira. Asi Pastor Mawarire vanoti vakasungirwa kunamatira vadzidzi ava kuti vave neramangana rakanaka.
Zvichakadaro, sangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union rashoropodza VaMawarire richiti havafanire kupindira munyaya dzevadzidzi.